ComPsych's 2021 Hutano @Work Mubairo unoenda kuInternet Optimism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » ComPsych's 2021 Hutano @Work Mubairo unoenda kuInternet Optimism
Online Optimism inofara kuzivisa kuti yakasarudzwa seYakanakisa-In-Kirasi Goridhe mubairo kumakambani ari pasi pevashandi zana paComPsych's 100 Health @Work Award. Iye zvino mugore rayo rechi2021, mubairo uyu unoona makambani anovandudza hutano nekugara zvakanaka kwevashandi kuburikidza nezvirongwa zvitsva zvine chinangwa kuvashandi vavo.
“Mubairo uyu unosimbisa kuzvipira kwedu kuvashandi vedu uye nekambani tsika nemagariro. Hapana chinhu chakakosha kudarika hutano hwepanyama uye hwepfungwa hwechikwata chedu, "Managing Director weNew Orleans Sam Olmsted akadaro. "Ndinodada kuva chikamu chesangano rinokoshesa uye rinoteerera vashandi varo."
Online Optimism inogovera danho nemasangano epasirese uye epasi rese, kusanganisira iyo National Basketball Association (NBA), Boston Medical Center, uye mamwe makambani anogadzira kukanganisa kwepasirese.
Nekuwedzera kweOperation Coordinator Sara Bandurian mu2020, Online Optimism yakakwanisa kutanga mamwe mapurogiramu uye zvirongwa zvakanangana nehutano hwevashandi. Vakatanga kirabhu yekufamba ye "Optimovers" kubatsira kukurudzira kufamba kwakawanda kuburikidza nemakwikwi ane hushamwari mukati mekambani. Ivo vane kirabhu yebhuku inosangana pamwedzi uye ivo vanopa Yevashandi Yekubatsira Chirongwa chehutano hwepfungwa kuraira.
Online Optimism's yemukati yeKomiti yeKomiti inoenderera mberi nekufunga nezvenzira nyowani dzevashandi dzekudyidzana uye kugara vakabatana, izvo zvinonyanya kukosha kupfuura nakare kose kubva kuwedzera kwekambani kuAtlanta neWashington DC.
"Chinhu chakanakisa nezve zvirongwa zvehutano pamwe nehutano ndezvekuti zvakagadzirwa nevashandi pachavo, saka zvakagadziriswa zvakakwana kune yedu kambani tsika," akadaro Operations Coordinator Sara Bandurian. "Tinoda kuona kuti vanhu vanonzwa kukosheswa, kuremekedzwa, uye kukosheswa pane zvese zvavanoita."